Boqor C/llahi boqor Muuse oo ka tacsiyaynaya geerida marxuum C/llahi Yusuf Axmed. – Radio Daljir
Boqor C/llahi boqor Muuse oo ka tacsiyaynaya geerida marxuum C/llahi Yusuf Axmed.
Maarso 23, 2012 12:00 b 0
Inaa Lillaahi Wa Inaa Ilayhi Raaijcuun.
Boqor C/llaahi Boqor Muuse ayaa tacsi u diraya Madaxwynihii hore Somaliya Cabdullahi Yusuf Axmed oo ku geeriyooday magaalada Dubai ee isutaga Imaraatka xallay oo taariikhdu ku beegneyd 23.03.2012
Boqor C/laahi Boqor Muuse oo ku hadlaya magaca dhaqanka beelaha Daarood ayaa uga tacsiyeynaya geeridaas guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan qaraabadii iyo qoyskii uu ka baxay Cabdullahi Yusuf Ahmed.
Sidoo kale Boqor C/laahi ayaa Eebbe ugu baryay inuu kitaabkisa midigta ka siiyo, uuna ka waraabiyo janatul fardowsa. AAMIIN!
Boqor C/laahi boqor muuse